Xaal Marin Professor Cumar Cali Farjac
Professor Cumar Cali Farjac, oo ah Aqoonyahan Soomaaliyeed, oo ka dhiidhiyay dhibaatooyinka lasoo darsay Deegaanada Puntland, doortayna inuu uga soo tanaasulo xirfaddiisii iyo meheradiisii, taasoo uu Barre Sare ka ahaa jaamacad ku taala Mareykanka, si uu dadkiisa wax ula qabto, ayaa waxaa dhacday in xaleysto illaa shalay shaashadaha Soomaalida lagu arkayay inuu ahaa Musharaxa kaliya ee aanan wax cod ah helin. Arintaas ayaa ku noqotay dad baddan oo aqoon u leh Prafassoorka arin aan la qaadan Karin. Farjac waxaa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa raggi wax ka dhigi jiray Kulliyaddii Dhaqaalaha ee Xamar, sidoo kale iskuulkii Xisaabaadka iyo cabbiraadda. Wuxuu kaloo ahaan jiray la taliye sare wasaaraddii Qorsheyta Qaranka Xilligii Dowladdii dhexe
Runtii Farjac waxaa uu meesha la tagay maskax ka horeysa ragga lagu sheegayey golaha wakiillada, taasoo ay ku adkeyd inay fahmaan halka uu ka hadlayo Farjac. Waxaa iyadana meesha aanan ka marneyn in uu jiray isfaham la’aan prafassoorka iyo dadka reer Puntland qaabka ay wax u doonayeen.
Farjac wuxuu meel walboo uu tago hadal hayey sidi loo badali lahaa nidaamka Puntland, isagoo aqoonyahanda ku qalqaalin jiray inay waddanka taagan. Farjac wuxuu watay qorshe aad u heer sareeya oo uu doonayey inuu la wadaago dadkiisa. Nasiib darro ma dhicin in laga faa’ideysto.
Haddaba waxaan leeyahay Farjacoow weli wey kuu baahan tahay Bulshada reer Puntland, codka golahan wakiiladana kama tarjumayo codka shicibka, fadlan go’aankaagii ahaa in aad la shaqeyn doonto ciddii ku guuleysata Doorashada, ka dhabeey, oo maamulkan cusub la shaqeey. Waxaan aaminsanahay inaad tahay shaqsi ay maanta Puntland u baahan tahay.
Sidoo kale iyaguna raggi Musharixiinta ahaa ee sanadkan u tafaxeytay inay qabtaan hogaanka Puntland, oo aan isleeyahay waxey ahaayeen rag u qalmay inay kaalintaas qabtaan, laakiin Ogaada gari labo nin kama wada qosliso. Maanta Puntland wey idiin baahan tahay ee sidii aad ugu soo diyaar garoowdeen inaad ugu shaqeysaan dadkiinii fadlan uga dhabeeya.
Madaxweynaha Cusub ee Puntland Mudane Faroole waxaan kula talinayaa inuu raggaas ka faa’ideysto, oo uu ama xukuumadiisa wasiiradda cusub ku daro ama uu ka dhigto la taliyayaashiis qaaska ah, gaar ahaan Janaraal Ilkojiir, Nuuradiin, Muxayadiin cali Yuusuf, Aadan Gaadaale iyo Farjacba..
Puntalnd inshaa’allaah guul ayeynu u rajeynaynaa iyo bulshadoo soo dhaweysa maamulka cusub, lana shaqeysa una duceysa.